Waftiga uu Hoggaminayey Madaxweynaha JSL ee ku Sugan Jabuuti oo Booqday Dekedaha Tojoro Iyo Lake-asal oo laga dhoofiyo Milixda..
Friday December 25, 2020 - 20:43:45 in Wararka by Super Admin
Jabuuti(Xogreebnews)- Waftigii Balaadhan-na ee u Hoggaaminayey Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Md Muuse Biixi Cabdi oo safar shaqo ku jooga Dalka Jabuuti, ayaa maanta booqday Dekedaha Tojoro iyo
Lake-asal ee Jabuuti. Safarkan Madaxweynaha Jamhuuriyadda ku joogo dalka Jabuuti ayaa galay maalintii Sadexaad.
Waftiga Madaxweynaha ayaa waxa wehelinayey Wasiirka arrimaha dibada Somaliland Professor Yaasin Faratoon Iyo Safiirka Somaliland u fadhiya Jabuuti Ambassador Cabdifatax Siciid Axmed iyo sidoo kale, waxa waftiga horkacayey oo ka socday dalka Jabuuti Wasiirka xanaanada Xoolaha, kalumaysiga dalka Jabuuti iyo Maareeyaha Dekedaha Jamhuuriyadda Jabuuti iyo sidoo kale, safiirka Somaliland u fadhiya Somaliland.
Dekeda Lake-asal ee u booqday Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Md Muuse Biixi Cabdi, ayaa laga dhoofiyaa Milixda, isla markaana waa Deked dib u dhis iyo balaaadhin lagu samayey. Sidoo kale Dekeda Tojoro, ayaa kamid ah Dekeda ugu mashquulka badan ee dalka Jabuuti.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Md Muuse Biixi Cabdi, ayaa mudooyinkii u dambeeyey ku hawlanaa kor u qaadista Xidhiidhka labada dal ee Somaliland iyo Jabuuti, isagoo sidoo kale kor u qaaday qadiyada aqoonsi raadinta ee qaarada Africa ee Somaliland.